Microsoft Office Student Discount (2020) - Sekoly sy oniversite - Tolotra
Microsoft office dia iray amin'ireo rindrambaiko famoronana sy fanovana lozisialy malaza indrindra. Malaza eo amin'ny mpianatra sy ny matihanina ary ny orinasa izany. Mahazo tombony be dia be ianao amin'ny fampiasana ity serivisy fanovana ity. Ankafizinay ny fampiasana mahafinaritra atolotry ny rindrambaiko ambony latabatra.
Amin'ity toro-lalana ity dia hiresaka momba ny fihenan'ny mpianatra rehetra izahay.
Manana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra ve ny biraon'ny Microsoft?
Microsoft dia andrana teknolojia, ary manantena foana izy ireo ny hiverina amin'ny fiarahamonina. Misy fomba an-taonina maro azonao atao amin'ny mpihaino anao. Ny programa fihenam-bidy ho an'ny mpianatra dia azo alaina ho an'ny mpampiasa mendrika rehetra. Azonao atao ny manandrana manararaotra an'ity tolotra ity raha manana kara-panondron'ny mpianatra. Kolejy sy oniversite maro no mampiasa izany mba hanomezana fifanakalozana tsara amin'ny mpianany. Ny fampidinana ny app desktop dia mitaky anao hividy drafitra. Ho azo io raha vantany vao mifandray amin'ny Microsoft ny andrim-pampianaranao ho an'ny drafitry ny mpianatra. Amin'ny maha olona anao dia tsy azonao atao ny mividy ilay programa mivantana hampiasanao.
Amboary ny lesoka Microsoft Minecraft Aka.ms/remoteconnect
Dingana ahazoana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra ao amin'ny Microsoft Office:
Ireo mpampiasa dia afaka mahazo ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra amin'ny fanarahana ny torolàlana etsy ambany. Lazainay ny dingana rehetra takiana mba hampihenana ny vidin'ny fisoratana anarana. Ireto ny dingana tokony harahinao.
Ny tranonkala 365 dia manana safidy tsy manam-paharoa ho an'ireo mpampiasa te hanana drafi-pampianarana. Azonao atao ny mitsidika an'io rohy . Hanampy anao amin'ny fanombohana ny fizotry ny fihenam-bidy.
Ireo mpampiasa vaovao dia afaka misoratra anarana ao amin'ny tranonkala miaraka amin'ny karapanondron'izy ireo. Azonao atao ny mampiditra ny .edu ID eo amin'ny lampihazo.Hahafahanao miditra amin'ny fihenam-bidy natokana ho an'ny mpianatra izany. Manantena aho fa afaka misafidy ny safidy I am mpianatra raha mampiditra ny adiresy mailakao ianao.
Ireo mpampiasa dia mila mamorona kaonty an'ny biraon'ny Microsoft. Ho maivana indrindra ny asanao. Ireo mpampiasa dia afaka mahazo tombony betsaka amin'ny alàlan'ity fampiasa ity. Manoro hevitra anao izahay hampiditra tsara ny antsipirihanao rehetra. Tsindrio ny bokotra fanombohana hanombohana haingana amin'ny fizotran'ny kaonty.
Afaka manomboka mampiasa ny fiasa Microsoft office 365 maimaim-poana ny mpampiasa. Hita eo amin'ny sehatra rahona izy io.Na iza na iza dia mahazo miasa amin'ny Microsoft office amin'ny alàlan'ity fomba ity. Afaka manomboka mamorona antontan-taratasy ny mpampiasa.
Dia izay! Ireo no dingana hanombohana mampiasa Microsoft office 365 ho an'ny mpianatra. Maimaimpoana tanteraka ho an'ny olona rehetra manana kaonty mpianatra.
Endri-javatra amin'ny Microsoft Office Student:
Tsy ilaina ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra ao amin'ny Microsoft Office. Izy io dia mety aminao raha mbola afaka miasa miaraka amin'ny kinova an-tserasera ianao. Ireto ny fiasa azonao ampiasaina amin'ny drafitra Student 365 A1 Student.
1. fidirana maimaim-poana amin'ny fampiharana Microsoft
Ireo mpampiasa manana kaontin'ny mpianatra dia afaka mampiasa an-tsakany sy an-davany ireo rindranasa ireo amin'ny famitana ny rindranasa sy ny fanendrena azy eny amin'ny oniversite. Izy io dia mety indrindra ho an'ireo izay maniry toerana iray amin'ny famokarany rehetra. Ny sasany amin'ireo fampiharana amin'ny sehatra dia misy Excel, Word, Teams, One Note, Powerpoint, ary maro hafa.
2. Drive iray
Maimaimpoana ny Drive iray hampiasa sehatra rahona azo ampiasain'ny mpampiasa rehetra. Mamporisika anao izahay hanandrana an'ity. Izy io dia mety indrindra ho an'ireo izay mila toerana hampiakarany ny atiny. Ny mpampiasa dia afaka mizara mora foana rohy fiara iray amin'ireo mpiara-mianatra aminy.
Microsoft dia marika iray izay manome lanja lehibe ny fiarovana ny mpanjifany. Afaka manantena tontolo iainana maharitra ny mpampiasa. Tena mahasoa ho an'ny olona manaja ny fiainany manokana.
Ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra ao amin'ny Microsoft office dia fisoratana anarana tsara ho an'ny mpampiasa. Manoro hevitra anao izahay rehetra hanandrana azy anio. Izy io dia sehatra famokarana tsy maintsy ananana amin'ny fianaranao sy amin'ny anjaranao.
CBS Mahazo fidinana ho an'ny mpianatra rehetra
Ahoana no manamboatra AirPods tsy mifandray amin'ny iPhone?
manao kapoka miaraka amin'ny keyboard midi
tranokala mozika tsy voasakana maimaimpoana any am-pianarana
sarimihetsika maimaim-poana azonao jerena
mivantana avy amin'ny solosaina mankany amin'ny chromecast amin'ny fahitalavitra
mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra mivantana maimaim-poana
rindrambaiko fanaovana kapoka maimaimpoana tsara